PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - Ugculisekile ngabadlali umqeqeshi wamaBoks
Ugculisekile ngabadlali umqeqeshi wamaBoks
Aseqalile amalungiselelo eNdebe yoMhlaba ezokuba seJapan
Ilanga - 2018-10-29 - Ezemidlalo - NHLANHLA HUDLA
WENELISEKILE ngeqembu lakhe uRassie Erasmus ongumqeqeshi wamaBhokobhoko azodlala uchungechunge lwemidlalo yeCastle Lager Outgoing Tour ezoqala mhla ka-3 kuLwezi (November).
AmaBhokobhoko azogadulisana ne-England, iFrance, iScotland bese evala ngeWales.
“Ngiyabethemba abadlali esibakhethile ukuthi bazobuya nemiphumela emihle ekuhambeni njengoba silungiselela imidlalo yeNdebe yoMhlaba eseJapan ngonyaka ozayo,” kusho u-Erasmus obukeka ewuvusa lo mkhumbi obucwila ngaphansi kobuholi buka-Allister Coetzee oshiye lesi sikhundla ngenxa yokuphikwa yimiphumela.
Kulesi sikwati u-Erasmus ufake no-Aphiwe Dyantyi (24) ongumdlali weGolden Lions yaseGoli ovutha engabaselwe okufakazelwa wukuqokelwa emklomelweni omqoka womhlaba. UDyantyi uqokwe emuklomelweni weWorld Rugby Breakthrough Player of the Year.
Ubanga lo mklomelo noKarl Tuíinukuafe weNew Zealand noJordan Larmour wase-Ireland. Lo mdlali odabuka eNgcobo, e-Eastern Cape, uqokwa kulo mklomelo nje, usagijime imidlalo engu-9 yama-test nje kuphela kumaBhokobhoko.
Nokho uqokwa nje, ubenza ezibukwayo ikakhulukazi emidlalweni yamaBhokobhoko namazwe amakhulu njengayo i-All Blacks ne-England. Useshaye ama- try angu-6 kula ma- test awadlalile.
Ukunqoba kwalo mdlali wakuleli lo mklomelo kulele kuJamie Heaslip, uFelipe Contepomi, uPhaidra Knight nabezindaba okuyibona abazobe bengamajaji.
Usihlalo we- rugby emhlabeni, uBill Beaumont, uthe: “Lo mklomelo weWorld Rugby Breakthrough Player of the Year kuhloswe ngawo ukuhlonipha umdlali emhlabeni owenze kahle emidlalweni yama-15’s noma eyama-7’s. Baningi abadlali ebesingabakhetha abenze kahle kodwa sibone laba kuyibona okufanele babangisane ngalo mklomelo. Noma ngubani ozonqoba uzokube umfanele ngoba bonke benze kahle.”
Selilonke iqembu labadlali abangu-36 elimenyezelwe ngoMgqibelo kusihlwa limi kanje, abasemuva: uGio Aplon, uDamien de Allende, u-Aphiwe Dyantyi, u-Andre Esterhuizen, u-Elton Jantjies, uChelsin Kolbe, uJesse Kriel, uWillie le Roux, uRuhan Nel, uSbu Nkosi, u-Embrose Papier, uSergeal Petersen, uHandre Pollard, uLouis Schreuder, u-Ivan Van Zyl noDamien Willemse.
Abaphambili: uSchalk Brits, uLood de Jager, uPieter-Steph Du Toit, uThomas Du Toit, u-Eben Etzebeth, uSteven Kitshoff, uVincent Koch, uSiya Kolisi (ukaputeni), uFrancois Louw, uWilco Louw, uFrans Malherbe, uMalcolm Marx, uBongi Mbonambi, uFranco Mostert, uSkhumbuzo Notshe, uTrevor Nyakane, uJD Schickerling, uRG Snyman, uDuane Vermeulen noWarren Whiteley.
U-APHIWE Dyantyi ongumdlali wamaBhokobhoko neGolden Lions oqokwe emklomelweni weWorld Rugby Breakthrough Player of the Year.
UVICHAI Srivaddhanaprabha oyisikhulu seLeicester City ngesikhathi inqoba indebe yeBarclays English Premiership ngo-2016.